Mampalahelo ny fahamarinana momba ny mampiaraka ao Shanghai Jays izao Tontolo izao
Voalohany eny, fotsiny aho te-ho mazava tsara fa tsy azoko manoratra momba ny rehetra ry zalahy sy ankizivavy ao Shanghai. Fantatro fa ny olona rehetra dia tsy manam-paharoa, ary ny fifandraisana dia afaka miovaova. Rehefa avy nilaza fa, mino aho fa ny zavatra aho momba ny hoe tsy mampihatra ny maro ny olona tao Shanghai. Aho niorina izany amin’ny zavatra tsy hita ve (sy za-draharaha mivantana) ao efa ho efa-taona eto. Nataony fotsiny izay maro amin’ny Shinoa tanora ny vehivavy mitady efa ela ny fe-potoam-ny fifandraisana amin’ny Tandrefana ry zalahy handeha ho tsy hahomby. Misy maro ny antony mahatonga izany. Iray azo ampiharina ny antony dia ny hoe misy tsy t ampy ny Tandrefana ry zalahy ireto mba hitsena ny fangatahana (tsy ratsy ny olana mba efa ianao raha Tandrefana lehilahy). Ny iray hafa dia ny hoe Tandrefana ry zalahy mora ho tonga ao Shanghai, noho ny taona vitsivitsy na latsaka, ary matetika no tsy liana amin’ny fandaminana midina eto. Ireo dia mahitsy tsara tarehy, fa ny s antony hafa fa maro ny olona mihevitra fa tsy t, milaza mafy noho ny s resaka saro-pady ny fahasamihafana ara-kolontsaina. Aho, dia tsy mahazo an-marobe ny lafiny ara-kolontsaina sy ny fomba Shina sy ETAZONIA mampitaha sy mifanohitra no manao izany dia handray lavitra be loatra ny fotoana ary hiala amin’ny teboka. I ll fotsiny ny miresaka fohy momba ny fahasamihafana misy eo amin’ny fiarahana sy ny fifandraisana. Any ETAZONIA, ny olona mazàna manomboka miaraka amin’ny iray taona aloha kokoa noho ny any Shina. Nihalehibe aho dia namporisika ny daty ny ankizivavy (amin’ny ray aman-dreniko, ny namana, ny fanatanjahan-tena ny mpanazatra, ary na dia ny mpampianatra), ary tsy maintsy ny voalohany sipa fony aho (alika fitiavana.). Amin’ny ankapobeny isika dia manana hevitra mandritra ny sekoly izay mampiaraka dia mahafinaritra, tsy lehibe, ary dia fanao tsara ho an’ny tena sy ny fifandraisana any aoriana any. Noho izany ny Amerikana (sy ny hafa Tandrefana) mazàna manana be dia be ny fahatokiana eo amin’ny fiarahana ny fotoana dia ao amin’ny s. Ampitahao amin’i Shina, izay hatramin’ny vao haingana ny s no tabooing ny daty amin’ny sekoly, ary be dia be ny olona no t namely ny mampiaraka toerana mandra-kolejy na taty aoriana. Ary, toy ny maneso, raha vao toy ny ankizivavy sasany farany oniversite ny ray aman-dreny te azy ireo hanambady. Noho izany, avy tamin’ny zavatra tsy afaka miteny, ny fifandraisana dia heverina ho toy ny tena zavatra lehibe sy ny lalana mankany amin ny fanambadiana fa ny fomba nentin-drazana-monina Shinoa. Noho ny tsy fahampian’ny mampiaraka zava-nitranga, sy ny zava-misy fa maro ny ho velona ao an-trano amin’ny ray aman-dreny tsara ho lasa olon-dehibe, be dia be ny Shinoa tanora vehivavy avy eny amin’ny maha-jaza ny Tandrefana ry zalahy. Etsy ankilany, dia fantatro fa misy be dia be ny tanora ao Shanghai izay tsy nentim-paharazana sy ny fitiavana ny antoko sy ireo manana mahafinaritra sy hook up sendrasendra fotsiny. Raha ny marina, toa tahaka ny misy ny tena mazava ny hantsana misy eo amin’ny antoko ankizivavy sy ny nentim-paharazana ny ankizivavy. Ary izay indrindra no mahatonga ny s sarotra ho an’ny Tandrefana ny bandy mahita ny lehibe Shinoa sipa, Raha ny lehilahy no mitady ny antoko ankizivavy, dia izy no t mitady ny fifandraisana lehibe (na izy fotsiny te-hanana ny sasany mahafinaritra raha mbola mitady sipa). Raha izy dia t antoko bandy fa dia mitranga mba hihaona ny antoko zazavavy, dia mety tsy ho liana loatra amin’ny ny maha-lehibe ny sipa satria ny Tandrefana ry zalahy matetika aza t te-kevitra ny hanorim-ponenana any amin’ny tovovavy izay zava-pisotro sy ny fikambanana be dia be, ary mora mandray an-trano. Be dia be ny fotoana ry zalahy (na ny Sinoa sy ny Tandrefana) sa t na mahafantatra ireo zazavavy ireo, satria izy ireo ihany no mifanena any mitabataba ny fikambanana izay manana ny resaka dia akaiky-tsy azo. Fomba nentin-drazana Shinoa ny tovovavy ihany koa ny mety tsy snag Tandrefana lehilahy, fa maro ny antony. Indraindray dia mbola t efa be ny fiarahana traikefa sy mirona ho sahiran-tsaina sy saro-kenatra, izay dia mahafatifaty amin’ny voalohany, fa ny vokany taloha fifadian-kanina. Na dia mety ho toy izany dia zava-dehibe amin’ny fihazonana ny nentim-paharazana ny sary fa izy exerts tena kely ny firaisana ara-nofo, sy ny Tandrefana lehilahy izay ampiasaina mba matoky kokoa ny ankizivavy dia tsy ho niverina intsony, raha misy dia t sasany, fara fahakeliny, soso-kevitra ny firaisana ara-nofo (izany dia t midika hoe mahazo ny ara-batana, izany fotsiny dia midika hoe maneho ny fahatokiany ny physicality). Nentim-paharazana sy ny tovovavy ihany koa mirona aoka ny daty mibahana ny resaka izay mety ho vokatry ny fiteny (matetika ry zareo mampiaraka amin’ny teny anglisy) na dia mety ho mahazo aina ao amin’ny mankato anjara toerana lehibe ho an’ny fomba amam-panao s amiko. Na izany na tsy izany, ny s tsy ny karazana zazavavy fa ny Tandrefana matetika ry zalahy handeha ho. Ny karazana tovovavy Tandrefana dia te daty ho zava-dehibe dia tany amin’ny toerana tany afovoan’ny ny antoko tovovavy sy ny nentim-paharazana zazavavy. Ary izy dia sarotra ny mahita, fara fahakeliny, teo amin’ny latsaky ny taona iray tao Shanghai. Fa teo aloha hevitra momba ny sakana apetraky ny teny dia manan-danja loatra. Ny fomba Tandrefana maro ny Shinoa mpivady fantatrao ve izay miteny Shinoa amin’ny tsirairay, fa tsy malagasy. Tsy maro aho ankamatatra. Noho izany, ny zava-misy fotsiny izy fa be dia be ny Sinoa vavy niaraka Tandrefana ry zalahy aza t miteny anglisy tsara dia olana iray hafa. Rehefa mihantitra sy matotra kokoa, dia toy izany aza ny resaka sy ny karazana resaka dia afaka amin’ny olona iray izay mahay tsara ny teny dia voafatotra mba manana lalina kokoa sy ny isan-karazany noho izany dia amin’ny olona izay mbola mianatra ny teny.
Raha daty Shinoa zazavavy izay tsy t miteny malagasy, afaka mahazo ny mahafantatra ny tsirairay, satria izaho miteny ny sasany Shinoa. Fa rehefa afaka kelikely izy dia mety leo ny tsotra Shinoa fanehoan-kevitra. Ataovy izany rehetra izany miaraka ary inona no azonao. Be dia be ny Tandrefana ry zalahy izay tsy mandray an-toerana ny zazavavy ho zava-dehibe ao Shanghai, noho izy ireo na tsy mahita na tsy t mitady ho an’ny fifandraisana matotra mpanohitra. Hoy aho tany am-piandohana fa ny ankamaroan’ny Shinoa tanora tovovavy mitady efa ela ny fe-potoam-ny fifandraisana amin’ny Tandrefana ry zalahy handeha ho tsy hahomby. Tokony hanazava izy ireo dia tsy ho an’ny ankehitriny. Saingy rehefa mihalehibe, dia mety hitombo an-karazana vehivavy izay no mety ho mafy orina mpiara-miasa ho an’ny Tandrefana ny lehilahy. Betsaka ny vehivavy eto. Ary mazava ho azy, misy be dia be ny Tandrefana Sinoa mpifankatia eto, fa dia nahomby maharitra. Izaho koa dia te-hanampy aho hoe t mieritreritra fa misy ny fenitra ara-kolontsaina ho an’ny andaniny marina na diso aho, afa-tsy miezaka ny fanehoan-kevitra amin’ny toe-javatra toy izany aho mahita izany. Izaho koa aza t dikan ny hoe milaza fa Shinoa ny vehivavy dia tokony hanery ny tenany mampifanaraka ny zavatra Tandrefana lehilahy te. Mieritreritra aho fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony manao ezaka mba hianatra momba ny iray hafa, ary ho vonona ny hanova ny ho lasa tsara kokoa ny mpiara-miasa. Na izany aza, mitoetra ny marina fa ny ankamaroan’ireo Tandrefana Shinoa mpivady miezaka miteny malagasy sy manaraka ny Tandrefana ara-kolotsaina, fa tsara na ratsy. Toy ny mihoatra ny Tandrefana ho lasa mahay tsara amin’ny teny Shinoa, ary fantaro bebe kokoa ny kolontsaina Sinoa fa mety tokoa ny fiovana.
Aho ozona ny fotoana izay aho mandrakizay amin’ny nentin-drazana Shinoa taloha. Lazaiko Stamos cuddling fest dia azo antoka fa fomba blissful amin’ny tandrefana mpiara-miasa tsy maintsy milaza izay tena marina dia tsy misy ny vato krystaly tsara na ny ratsy, amin’ny lafiny iray, na ny maha antoko tovovavy na ho nentim-paharazana ny zazavavy, na teo amin’ny ara-kolotsaina. Raha mbola toy ny maha-isika, dia velona ho an’ny ankehitriny sy miezaka ny ho tia na inona na inona amin’ny fiainanao ny manolotra ny raharaha ho ahy fara-faharatsiny. Izany no mitranga ny ankamaroany, fa ny olona hitsara araka ny zom-pirenena na ny olona sasany no tsy ho latsaka ao, na inona na inona ny sokajy, izay mampalahelo. Hey Jade, manaiky aho fa indraindray isika dia generalize be loatra ny amin’ny zom-pirenena. Ny s afa-tsy ny maha-olombelona mba miezaka manasokajy sy ny hanatsorana ny zava-drehetra, ary olona iray ihany zom-pirenena matetika efa maro ny zavatra mahazatra, saingy mazava ho azy fa tsy foana. Ankizivavy aho ve mitondra ny datin ao Shanghai aza t latsaka ao na ireo sokajy roa. Haj Jay, ny manontolo Ny mampalahelo marina momba ny mampiaraka ao Shanghai toa mampalahelo ny zava-misy ho an’ny tovovavy Shinoa, noho izany dia manontany tena aho hoe inona momba ny avy any ivelany ry zalahy, na vahiny ankizivavy.
na. Na dia izany aza, izaho manaiky fa, raha ny daty dia tsy mahafinaritra, ary dia tena mampalahelo ny roa tonta. Hey Vatosoa, ny s tsy olana ho an’ny tovovavy Shinoa ny s ihany koa ny olana fa avy any ivelany ry zalahy, indrindra ireo izay efa eto intsony. Ny mahafinaritra ny fivoriana maro ny mora ankizivavy sy manao fety eny rehefa afaka kelikely, ary ny s tsy mora (raha ny hevitro) mba hahita ny tovovavy fa izy ireo no tena afaka mifandray sy manana ny resaka lehibe. Izany dia t midika fa Shinoa vavy dia t ampy tsara, ny s fotsiny fa ny sakana apetraky ny teny sy ny fahasamihafana aho, dia niresaka momba ny lahatsoratra fa ho sarotra ny hanao ny karazana fifandraisana izany dia mitarika ho amin’ny fifandraisana matotra. Heveriko fa izany dia mihatra ihany koa ny tsy Sinoa avy any Azia. Mino aho fa tsy naka ny hevitry ny hoe nahoana ny Tandrefana ry zalahy manana fotoana sarotra manana fifandraisana amin’ny nentim-paharazana Shinoa vehivavy Aziatika beck. izahay dia mety ho tonga eny amin’ny maha-jaza toy ny kolontsaina dia t tena hamorao ny fiarahana na tsotsotra ny fifandraisana. Isika ho vonona kokoa ny fiarahana sy ny fambolena dia lehibe fifandraisana. Heveriko fa manampy raha andaniny sy ny ankilany dia mahatsapa ny fahasamihafana ara-kolontsaina. Ny fifandraisana no tena zava-dehibe, fa tsy afaka tena hametraka izy ho mahafehy tsara ny teny anglisy, dia afaka ianao
← Tsara Indrindra Maimaim-Poana Webcam Toerana Maimaim - Poana Amin'ny Chat Roulette
Shina Sendra Olon-Kafa Chat Room Tsy Misy Fisoratana Anarana →